लेस्टरको जितमा भार्डेले गरे दुई गोल
एजेन्सी। जेमी भार्डेको दुई गोल प्रेरित लेस्टर सिटीले इङ्लिस प्रिमियर लिगमा आज वेस्टब्रोमलाई ३-० को नतिजामा पराजित गरेको छ। हिजोदेखि सुरु भएको प्रिमियर लिगको नयाँ सिजनको पहिलो खेलमा लेस्टरले सहज जित दर्ता गर्‍यो। खेलको सुरुआतदेखि नै गोलका लागि निरन्तर प्रयासरत लेस्टरले पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा रोकिनु परेको थियो। तर, दोस्रो हाफमा थप आक्रामक शैली अपनाएको […]
अर्को वर्ष क्लब छाड्ने एमबाप्पेको योजना
काठमाडौं – अहिले विश्व फुटबल बजारमा फ्रान्सका युवा स्टार किलियन एमबाप्पेको भविष्य कुन क्लब होला भन्ने अड्कल बाजी चलिरहेको छ । अहिले फ्रान्सको लिग वान क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेनमा रहेका एमबाप्पेको क्लबसँग सन् २०२१–०२२ सिजनसम्मका लागि सम्झौता रहेको छ । यहिँ बीच पीएसजीले एमबाप्पेसँगको सम्झौता बढाउने विषयमा छलफल गरेको छ । तर, उनले अहिले क्लबसँग […]
प्रिमियर लिगमा आज टोटेनहम र एभर्टन भिड्दै
एजेन्सी-इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज टोटेनहम र एभर्टनबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । सिजनको पहिलो खेलमा टोटेनहमले एभर्टनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो । टोटेनहमको मैदानमा हुने खेल नेपाली समय अनुसार राति ९ः१५ मा सुरु हुनेछ । प्रिमियर लिग अन्तर्गत नै अर्को खेलमा लेष्टर सिटीले वेस्ट ब्रुमसँग खेल्नेछ ।
सेरेनालाई हराउँदै अजारेन्का युएस ओपनको फाइनलमा प्रवेश
एजेन्सी-यूएस ओपन टेनिसको सेमिफाइनलबाट सेरेना विलियम्स बाहिरिएकी छिन् । सेमिफाइनलमा बेलारुसकी भिक्टोरिया अजारेन्कासँग पराजित भएपछि सेरेना बाहिरिएकी हुन् । न्युयोर्कमा भएको खेलमा २४ पटकको ग्राण्डस्लाम विजेता सेरेनाले पहिलो सेट ६÷१ ले आफ्नो बनाएकी थिइन् । तर, त्यसपछिका सेटमा भने पराजित भईन् । ३१ वर्षिया अजारेन्का तेस्रो पटक युएस ओपनको फाइनल पुगेकी हुन् । अब अजारेन्काले […]
अपराजित रहँदै ट्रिनबागोले जित्यो सीपीएलको उपाधि
एजेन्सी- ट्रिनबागो नाइट राइडर्सले क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) टी–ट्वान्टी क्रिकेटको उपाधि जितेको छ । बिहीबार भएको फाइनलमा सेन्ट लुसिया जोउक्सलाई ८ विकेटले पराजित गर्दै ट्रिनबागोले उपाधि जितेको हो । ट्रिनबागोले अपराजित रहदै उपाधि जितेको हो । यस्तै ट्रिनबागोले तेस्रो पटक सीपीएलको उपाधि जितेको हो । ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियममा सेन्ट लुसियाले दिएको १ सय ५५ […]
नयाँ सिजनको पहिलो खेलमा पीएसजी पराजित
एजेन्सी- स्टार खेलाडी विनको पेरिस सेन्ट जर्मन (पीएसजी) ले लिग वान नयाँ सिजनमा खराव सुरुवात गरेको छ । सिजन २०२०–२१ को पहिलो खेलमा लेन्ससँग १–० ले पराजित हुँदै सिजनमा खराव सुरुवाता गरेको हो । बिहीबार राति लेन्सको घरेलु मैदानमा भएको खेलमा इग्नाटिउस गानागोले खेलको एक मात्र निर्णायक गोल गरेका थिए । पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा […]
नेपाली क्रिकेटरले पाए २०१९ को तलब
काठमाडौं – नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टीमका २२ जना खेलाडी र १ टेक्निकल एनालिसिष्टले सन् २०१९ को तलब पाएका छन्। अघिल्लो हप्ता आईसीसीले क्यानको खातामा पैसा पठाएपछि क्यानले बुधबार खेलाडीको खातामा पैसा जम्मा गरेको हो। यसपटकको तलब पहिलेकोभन्दा १० हजार रुपैयाँ बढेर आएको क्रिकेटर सन्दीप जोराले जानकारी दिए । आईसीसीले खेलाडीको प्रदर्शन हेरेर २०१९ मा २२ […]
बिहिबार, भदौ २५, २०७७
इंग्ल्याण्डविरुद्धको अन्तिम टी–ट्वेन्टी क्रिकेट अष्ट्रेलिया पाँच विकेटले विजयी
एजेन्सी- इंग्ल्याण्डसँगको तेस्रो तथा अन्तिम ट्वेन्टी ट्वेन्टी क्रिकेट अष्ट्रेलियाले पाँच विकेटले जितेको छ । इंग्ल्याण्डले दिएको एक सय ४६ रनको लक्ष्य अष्ट्रेलियाले पाँच विकेट गुमाएर तीन बल अघि नै भेटायो । उसका लागि एरोन फिन्च र मिचेल मार्सले समान ३९/३९ रन बनाए । यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको इंग्ल्याण्डले २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर एक सय […]
सीपीएल क्रिकेट : सन्दीप आबद्ध जमैका सेमिफाइनलबाटै बाहिरियाे
काठमाडौं- क्यारेबियन प्रिमियर लिग सीपीएल क्रिकेटमा नेपालका सन्दीप लामिछाने आबद्ध जमैका तालावाज सेमिफाइनलबाटै बाहिरिएको छ । गएराति भएको खेलमा ट्रिनबागो नाइट राइडर्ससँग ९ विकेटले पराजित भएसँगै जमैका अन्तिम चारबाटै बाहिरिएको हो । जमैकाले दिएको १ सय ८ रनको सामान्य लक्ष्य ट्रिनबागोले १५ ओभरमा मात्र १ विकेट गुमाएर भेटायो । उसका लेन्ड्स सिमोन्सले नटआउट ५४ र […]
रोनाल्डोले पूरा गरे १००औं अन्तर्राष्ट्रिय गोल
काठमाडौं- पोर्चुगिच फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोले आफ्नो १००औं अन्तराष्ट्रिय गोल पूरा गरेका छन् । उनी यो उपलब्धि हात पार्ने युरोपको पहिलो तथा विश्वको दोस्रो खेलाडी बनेका छन् । राष्ट्रिय टोलीका लागि सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने रेकर्ड इरानका अली दाइको नामा ५ । १०९ गोलका गरेका अली सर्वाधिक अन्तराष्ट्रिय गोल गर्ने खेलाडीको सूचीमा शीर्ष स्थानमा रहेको हुन् […]
कञ्चनलपुरमा वडाध्यक्षमाथि अज्ञात समूहबाट आक्रमण
काठमाडौं उपत्यकामा थप ९०२ जना कोरोना भाइरस संक्रमण
नेपालमा थप १५५९ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, १०५७ जना डिस्चार्ज
नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप ७ जनाको मृत्यु
चितवनमा कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोपमा एक सैनिक पक्राउ
सागर थापा बने मनास्लु कलेजको ब्रान्ड एम्बासडर
कर्मचारीमा कोरोना देखिएका कारण श्रम स्वीकृतीको काम ठप्प
कपिलवस्तुमा साढे सात केजी अफिमसहित दुई पक्राउ
हुम्लाको नाम्खामा सशस्त्र पोष्ट स्थापना गर्ने तयारी
पेट्रोलमा तारपिन तेल मिसाउने चालक थनाकोटबाट पक्राउ
यस्तो छ आज बजारमा सुनको मूल्य
मलेसियामा नेपालीलाई बन्धक बनाएको आरोपमा डेविट काठमाडौंबाट पक्राउ
आजको मौसम : केही स्थानमा हल्का वर्षा हुने
विश्वमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या १० लाख ११ हजार ९८१
आईपीएलमा सनराइजर्स हैदरावादको पहिलो जित, दिल्ली क्यापिटल्स १५ रनले पराजित
जेल बस्ने बलिउड कलाकार, कसको करियर के भयो?
ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
बजार भाउ भन्दा महँगोमा प्याज बेच्ने एक व्यापारी पक्राउ